Thuthukisa ukubonwa kwedatha yakho ngezimpawu zedijithali - i-EMD
Awekho amazwana on How Easy Multi Display can help you improve your data visualization?Posted in I-Digital Signage, I-Enterprise Signage By stalematePosted on 11 / 06 / 2021 18 / 06 / 2021
Okokuqala, liyini ideshibhodi?
Ungayakha kanjani ideshibhodi?
Ungayisetha kanjani ideshibhodi yakho ukwenza ngeso lokhozi ukubonwa kwedatha yakho?
Siyazi ukuthi ukudluliswa kolwazi kuyinto ebaluleke kakhulu ezinkampanini ezifisa ukukhulisa inzuzo yazo ngokushesha okukhulu futhi esikhathini esizayo. Kodwa-ke, kubalulekile ukuba nomhlaba jikelele ukubona ngemininingwane ukuze uyihlaziye kahle. Ngakho-ke kule ndatshana sizokunikeza ukuqala kwempendulo ephathelene nenhlanganisela ye- amadeshi futhi izimpawu zedijithali
Ideshibhodi iyithuluzi lokuphatha lenkampani inhloso yayo ukulindela ukuvela kwemakethe lapho inkampani iguqukela khona ukuze umphathi wenkampani enze izinqumo ezihambisanayo ngokwemakethe.
Ngamagama aphathekayo, ideshibhodi iyithuluzi lokuxhumana langaphakathi elivumela ukukhonjwa kwezinkinga inkampani engabhekana nazo esikhathini esizayo esiseduze. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamadeshibhodi ezivumela izinkampani ukuthi zilindele ushintsho:
- Ideshibhodi yokusebenza: ilusizo ekuqapheni izinhlelo zesikhashana;
- Ideshibhodi yesabelomali: okuqhathanisa ukubikezelwa kwesabelomali senkampani, ngakho-ke kuyideshibhodi edalelwe isikhathi esimaphakathi;
- Ideshibhodi yamasu: ithuluzi eligxile isu lenkampani futhi ngenxa yalokho esikhathini eside.
Njengoba ukwazi ukubona, ukubonwa kwedatha kubalulekile ukuze uhlale uncintisana. Ukuze wakhe ideshibhodi yakho yebhizinisi ukuze ube ngcono ukubona ngemininingwane, kubalulekile ukulandela ezinye izinyathelo eziyisisekelo zokuletha umyalezo ofanele kumuntu ofanele. Ake sibone izinyathelo ezinhlanu zokwakha ideshibhodi yakho:
Cabanga ngezindawo zentuthuko: okokuqala kubalulekile ukwethulela inkampani yakho esikhathini esizayo ngakho-ke ukusetha izinhloso;
2. Chaza ngokusobala abantu abaphethe: kufanele uchaze ngokusobala ukuthi ngubani ozophatha ukuhlaziya imininingwane;
3. Chaza izinhloso zokusebenza: ngalesi sinyathelo, inkampani kufanele ithuthukise isu layo;
4. Khetha izinkomba zokusebenza: iyiphi idatha ezodingeka?
5. Ukucaciswa kwedeshibhodi: kufanele kuboniswe ngaluphi uhlobo amagrafu nezibalo?
Kepha lokhu akwenele, udinga imishini ukukhombisa ideshibhodi yakho ukuze uthuthukise ukubona ngemininingwane yenkampani yakho!
Udinga ikhompyutha, isikrini esisodwa noma eziningi futhi ekugcineni ube nesoftware enamandla, ethembekile futhi esheshayo yezimpawu zedijithali. Ikhompyutha incike kwinani lezikrini onazo noma ohlose ukuzisebenzisela ukusakaza ideshibhodi yakho. Ngempela, ungaba nezikrini ezimbalwa kepha kuzodinga izinsizakusebenza ezingeziwe ngakho-ke ikhompyutha engcono. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ucabange ngezidingo zakho ngaphambi kokwenza ideshibhodi yakho. Uma ufuna ukusebenzisa isikrini esisodwa kuphela, i-mini-pc ingenza iqhinga. Uma ufuna ukusebenzisa izikrini eziphakathi kwe-4 ne-6, lapho-ke uzodinga ikhompyutha enamandla kakhulu enama-plugs amaningi we-HDMI njengoba unamathelevishini. Kodwa-ke, uma ungafuni ukutshala imali kumathelevishini amaningi kakhulu, kusese khona izixazululo ezingabizi kakhulu. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngehadiwe, unganqikazi Xhumana nathi, sizojabula ukukusiza! Uma ufuna ngqo ukuthenga i-Hardware ngakho-ke udinga ukuthola iwebhusayithi efana nayo yibhabhu.com.
Noma ngabe ufuna ukusebenzisa izikrini eziyi-6 noma i-1 nje, i-Easy Multi Display izokwenza ubuqili futhi ivumele inkampani yakho ukuthi ibe nokubona okuhle kwedatha! Kungani i-Easy Multi Display kufanele "ube nayo" enkampanini yakho? Vele ngoba isekela izikrini ezifika kwezingu-6 nemithombo engama-24 (imithombo emi-4 kusikrini ngasinye). Lokhu kusho ukuthi noma ngabe unesikrini esisodwa kuphela, ungabonisa imithombo yemidiya ehlukahlukene efika kwezine njengezithombe, amashidi e-Excel, amavidiyo, isoftware nokunye okuningi!
Ngaphezu kwalokho, i-Easy Multi Display inezici eziningi ezibalulekile kunoma iyiphi inkampani efuna ukusebenzisa amadeshobhodi. Sikunikeza isoftware ekuvumela ukuthi uhlele ukubonisa kwakho ngaphambi kwesikhathi, ukunikeza amalungelo abasebenzisi bakho, ukusebenzisa irimothi ukuze uphathe ideshibhodi yakho ukude nokuningi! Ekugcineni, i-Easy Multi Display yisoftware yezimpawu ezidijithali ephelele kepha futhi eshibhe kakhulu emakethe. Unganqikazi isikhathi eside bese ulanda inguqulo yethu yesilingo!